Ukudalwa iyiphi ibhizinisi commercial okuhloswe ngazo ukwenza inzuzo. Ngakho-ke, kufanele uqale ukuthola ukuthi ibhizinisi inzuzo manje evulekile, ukuze singathwesi ushise. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi kufanele esisingatha ngayo izimo icala lapho ukuntuleka ingqondo namandla. Kodwa akunjalo. Ake sibone!
izindawo eziyinhloko ukuthuthukiswa kwebhizinisi
Okwamanje, ukuthuthukiswa kwebhizinisi kungathatha indawo ezindaweni ezine: Amahhovisi, kucocisana, ukukhiqizwa futhi ukuhweba. Indlela yokuvula ibhizinisi inzuzo emkhakheni zokukhiqiza? Ngokumangalisayo, esikhathini sethu, okukhipha akudingi utshalomali olukhulu. Kanye ukuthuthukiswa ubuchwepheshe banamuhla ngokunenzuzo, intengo imishini wawa. Naphezu kweqiniso lokuthi ukukhiqizwa - a umkhakha ethembisa, futhi amathuba ezishile ngokusebenzisa amancane imibono izindleko-inzuzo ukuhlaziywa kumele kwenziwe noma kunjalo. Omunye Amathrendi payback kakhulu embonini - ukukhiqizwa kwemikhiqizo ngokhonkolo. Ibhizinisi emkhakheni service kungaletha inzuzo enkulu. Ngokwesibonelo, ekutholakaleni ubuhle - kuwumqondo omuhle, ngoba abantu ngaso sonke isikhathi silwele ukungabheki ukungafani ezinhle. Nge ukuthuthukiswa kwebhizinisi efanele ungaphumelela. Abambalwa imibono eminingi emihle ku ukuthi uluphi uhlobo lwebhizinisi inzuzo manje ivulekele: abambisise ahlanzekile-up kanye udoti, ukuhlanzwa inkampani, inhlangano kukadoti kusukela ukwakhiwa sites.
Thola impendulo yombuzo othi lokho uhlobo ibhizinisi manje inzuzo ukuvula ezihlukahlukene. Okokuqala kubalulekile ukuhlola futhi ukuqoqa ulwazi olumayelana nezinhlobo kungenzeka womsebenzi ebhizinisi. Khona-ke kudingeke aqhube kokuhlaziya emakethe, izidingo abathengi kanye ukuxhumana osomabhizinisi yimpumelelo ngubani ukuziqalela amabhizinisi abo. Njengomthetho, abantu abanjalo bayazi kahle umsebenzi wabo, ngakho-ke abakwazi ukweluleka into ewusizo. Uma unquma on the uhlobo ebhizinisi umsebenzi, yenza iplani yebhizinisi, okuyinto kuyodingeka ukuhlola inzuzo engaba khona, usayizi ukutshalwa nobunzima ukuqala ibhizinisi.
Ukuvula ibhizinisi lakho siqu, kungcono ukugxila amaklayenti kusukela kwezakhi phakathi umphakathi, futhi ukunikeza imithi efanele lebanga lentengo. Kungakhathaliseki ukuthi inzuzo ebhizinisini manje evulekile, ungakwazi impumelelo Amazing, uma ungakhohlwa ubuchwepheshe mayelana okusezingeni eliphezulu. Inani elikhulu labantu ngesikhathi esisodwa ahlinzekwa izethameli isethi yokuqala namasevisi njengamanje osomabhizinisi abacebile. Ukhiye main empumelelweni ibhizinisi - okwatholakala kanye okwalandela kusetjentiswa ngemphumelelo umqondo, okuyinto abantu abaningi eyaziwa, kodwa ngenxa ukumaketha obungafanele kukhulunywa kabi ngathi akusiyo inzuzo. Ukwazi impendulo yalo mbuzo, ukuthi ibhizinisi inzuzo manje evulekile, futhi ukukhomba kanye nomqondo, kufanele sikhumbule, namakhono sabo sezimali. ukubolekisa elikhulu kuthathwe sokuthuthukiswa kunjalo, kungenzeka eminye kuholele uyincithakalo inkampani. Ngakho-ke kungcono ukuqala amaphrojekthi amancane.
German umalusi eside-onezinwele ezimhloshana. Yangaphandle uMalusi eside-onezinwele ezimhloshana German
Ngo-umthetho - liwumbimbi. Kanjani ukuze alungise elala nomkamfowabo kayise?
Lapho umphefumulo ifinyelela ukukhanyiselwa, funa yokudlela India e Moscow
Ingaphakathi nengaphandle ngokuhambisa iminyango: izici kanye nezinzuzo design